I-MCare - Izigidi zeMali
Iinkonzo Zokungena: 22156. Iinkonzo Zomthetho: 19132. Iinkonzo zeIT: Iiprojekthi ezili-1000 zeenkampani ezincedayo: 26742.
inyathelo 1 : Ukuchonga iimfuno zoNtu / zoSapho / zezoShishino.
inyathelo 2 : Ukukhethwa kwamathuba angcono / ukhetho lokufezekisa ngempumelelo iinjongo kunye neenjongo.
inyathelo 3 Ukuthumela ezona ndlela zintle zokuvunywa.
inyathelo 4 : Ukuba kunokwenzeka, ukubeka esweni utyelelo kweli lizwe, ukuba alusekho.
inyathelo 5 : Funda ngokusebenza.
inyathelo 6 : Iingcebiso ngezezimali kunye nerhafu, ukuba kufanelekile.
inyathelo 7 Isishwankathelo kunye nenkcazo eneenkcukacha zamathuba anokubakho.
inyathelo 8 : Ukongamela kwinkqubo.
inyathelo 9 Ukulungiselela kunye nokungenisa kwabasemaGunyeni abafanelekileyo.
inyathelo 10 : IMPUMELELO!
Iyunayithedi steyitsi (United States)
Asixhasi okanye aboneleli ngeenkonzo zethu kwezi zigaba zichaziweyo zingezantsi kubantu abahlukileyo kunye / okanye kumashishini